Ikamu Lomndeni - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Phila isikhathi somndeni esihle kunazo zonke empilweni yakho
Inkambu YomndeniFunda, Hlola, Thola nokukhula
6 ukuze 17
Uhlelo lwethu lonke oluhlanganisiwe lwekamu lomndeni lunikeza wena nengane yakho okuhlangenwe nakho okuhlukile, okuvumela wena nengane yakho ukuthi nithuthukise amakhono olimi ngesiNgisi noma ngesiFulentshi.
Izinhlelo zasekamu lomndeni le-BLI zinikeza umuzwa omuhle phesheya ohlanganisa ukufundwa kwesiNgisi nesiFulentshi ngezinto ezahlukahlukene ezijabulisayo endaweni ephephile nenakekelayo.
Ubusika: Amaviki amabili kuya kwayi-2 / Ehlobo: Amaviki amabili kuya kwayisithupha
Ubusika: Disemba 15 / Ihlobo: Juni 28
Ubusika: UFebruwari 8 / Ihlobo: Agasti 8
Izifundo zenzelwe ukugxila kumakhono wokuxhumana nokwakha ukuzethemba. Abafundi banikezwa ithuba eliningi lokukhuluma ekilasini ukuze bathuthukise ikhono labo ngemisebenzi yokufunda eminingana ethokozisayo.
Amakilasi ahambisana nezinkundla zokusebenzela. Bona khuthaza ukuzimela ngezilimi, ukuguquguquka. Ngokusebenza ngokubambisana nabaholi babo beWorkshop, abafundi bazonikezwa iphrojekthi okumele iphothulwe isonto ngalinye futhi yethulwe ngoLwesihlanu.
Njalo ngeviki sinikeza imihlangano yokucobelelana ngolwazi enjenge:
Abafundi bathatha Izifundo ezingama-25 zesiNgisi noma zaseFrance abafundisi abanamakhono afanele.
Imisebenzi yansuku zonke ihlelwe ngendlela yokuthi abafundi bahlale bezithokozisa ngandlela thile.
Dlala umqhudelwano wesiteshi
Banikeza abafundi ithuba lokuzwa umhlaba omusha ngezindlela ezintsha, bathole izinto ezintsha, benze abangane abasha futhi basebenzise amakhono abo amasha esiNgisi / isiFulentshi ngaphandle kwekilasi. Lolu hlelo lubandakanya ukuvakasha okugcwele ngempelasonto noma imisebenzi emi-2 yosuku olugcwele ngezimpelasonto
Ngempelasonto abafundi bathola izindawo ezinjengalezi:
Isampula Yamaholide Esonto
Ottawa 1 Usuku
I-Quebec City 1 Usuku
I-Magic Canada tour
I-Toronto, iNiagara Falls 2Days
Inketho yefenisha efenisiwe iyatholakala.
Kuhlelo lwethu lomndeni, uzohlala efulethini elinamagumbi, ifulethi elinemizuzu engu-20 ukusuka kwikhampasi yethu eyinhloko.
24 / 7security
Indawo Yokudlela Nekhishi (Isiqandisi, Ihhavini, Isitofu, Imicrowave)
Indlu yangasese yangasese (Bath, Shower, Hairdryer, Izindlu zangasese zamahhala)
Umenzi wetiye / ikofi
Ithawula, ilineni, iphepha lasendlini yangasese
I-TV, Ucingo, Umsakazo
Igumbi lokuhlanza ($)